October 18, 2021 - Channel Lover
လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်
October 18, 2021 by Channel Lover
လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ပြန်လည်လွတ်မြောက် ဧရာဝတီ၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးထားသည့် လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ယနေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်း ၎င်းမိသားစုဝင်များနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရင်းမြစ်များက အတည်ပြုသည်။ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့က နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် လူရွှင်တော် ဇာဂနာသည် အင်းစိန်ထောင်တွင် ၅ လကျော်ကြာ ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရသည်။ ဇာဂနာလွတ်မြောက် လာသည့်အတွက် ပရိတ်သကြီးလဲ ၀မ်းသာနေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် unicode လူရှငျတျော ဇာဂနာ ပွနျလညျလှတျမွောကျ ဧရာဝတီ၊ အောကျတိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အာဏာသိမျး စဈကောငျစီက ဖမျးဆီးထားသညျ့ လူရှငျတျော ဇာဂနာ ယနတှေ့ငျ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာကွောငျး ၎င်းငျးမိသားစုဝငျမြားနှငျ့ နီးစပျသညျ့ သတငျးရငျးမွဈမြားက အတညျပွုသညျ။ ဧပွီလ ၆ … Read more
မန္တလေး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ယနေ့ ဗုံးကွဲ(ရုပ်/သံ)
မန္တလေး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ယနေ့ ဗုံးကွဲ(ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ မန္တလေးမြို့တွင် ပြည်တွင်းအခွန်ရုံး ၄ ခုနှင့် တိုင်းစည်ပင်ရုံးတို့တွင် ယနေ့ ဗုံးများ ပေါက်ကွဲပြီး စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာဘီယာဝင်းအတွင်းတွင်လည်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။ ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်ကြီးတံခွန် အခွန်ရုံး၊ ချမ်းအေးသာဇံ အခွန်ရုံး၊ မဟာအောင် မြေ အခွန်ရုံး၊ ချမ်းမြသာစည် အခွန်ရုံး၊ တိုင်းစည်ပင်ရုံးအတွင်းနှင့် မြန်မာဘီယာဝင်းအတွင်းမှာ ပေါက် ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ “ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာကတော့ ၁၁ ခွဲဝန်းကျင်လောက်ကပဲ၊ အထိအခိုက်အခြေ အနေကတော့ သေချာမသိရသေးဘူး။ တခြားနေရာတွေက အခွန်ရုံးတွေမှာလည်း တပြိုင်နက်တည်းပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်တယ်လို့တော့ သိရတယ် ” လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ … Read more
အောက်လမ်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ခံထားရရင်တောင် ပြန်ပွင့်စေတဲ့ အလွန်ရှားပါးရှေးကျသောပညာရပ်…
အောက်လမ်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ခံထားရရင်တောင် ပြန်ပွင့်စေတဲ့နည်း အောက် လမ်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ထားသည့်တိုင် ပိတ်နေတဲ့ကံ ပြန်ပွင့်လာစေမည့် အစွမ်းထက်သည့်နည်း ဖန်ခွက် ၂ခွက် ထဲ ဆား ပြည့် ထည့်် သံပရာသီး အဝါ ၁လုံးစီး တင် အရိုးတံပါ ငရုပ်သီးအခြောက် အတောင့် ရှည် ၁တောင့် စီ စိုက် အိမ်တံခါး အတွင်း ဘက် ၁ဖက် စီထား တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါ နေ့သောကြာ နေ့ ၃နေ့တွင် မိမိ အဆင်ပြေသော နေ့ မနက် ပိုင်းပြု လုပ်ပါ… ၁ပါတ်ပြည့်သော နေ့(ဥပမာ သောကြာနေ့ပြုလုပ်ပါက ကြာသပတေး … Read more
ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါးလေးမှာ ဒီလိုကပ်ပြီးအိပ်ကြည့်ရင် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
” ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါးလေးမှာ ဒီလိုကပ်ပြီး အိပ်ကြည့်ရင် ရမည့် အကျိုးကျေးဇူး ” ကြက်သွန်နီဟာ မြန်မာတို့ရဲ့ မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ဟင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ကြပါတယ်။ အသုပ်တွေမှာလည်း ထည့်သုပ်ကြသလို ကြော်၍ လည်း စားကြပါတယ်။ ကြက်သွန်ဟာ စားရုံသာမက ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ အရာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်သုံး ဆေးဝါးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါသေးတယ်။ တရုတ်ရိုးရာ ဆေးနည်းမှာတော့ ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါး အောက်မှာထားပြီး အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးများစွာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခြေဖဝါးဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွက်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အာရုံကြောတွေ စုဆုံရာ အရပ် ဖြစ် ပါ တယ် ။ ခြေဖဝါးမှာရှိတဲ့ အကြောတွေကို ကောင်းမွန်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က ကျန်အစိတ်အပိုင်းတွေကို … Read more
ပြည်သူတွေမသိသေးတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေရဲ့ လွမ်းမောစရာလေးတွေကို ရေးသားလာတဲ့ ထားထက်ထက်
ပြည်သူတွေမသိသေးတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေရဲ့ လွမ်းမောစရာလေးတွေကို ရေးသားလာတဲ့ ထားထက်ထက် လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကျွန်မတို့ စတည်ခဲ့တဲ့ စခန်းရဲ့အပါတ်စဉ် (၃) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကို ပြန်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…လုံခြုံရေးအရ စခန်းကနေ ထွက်ခွါခဲ့ရပေမယ့် အဲ့ဒီနေရာလေးက အမှတ်တရပေါင်း များစွာနဲ့ပါ…နံနက်လင်းချိန် သွေး သစ္စာသီချင်းဆိုပြီးတာနဲ့ ရတဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက်ကို ရအောင်ပြန်အိပ်ကြတဲ့ ကိုတယောတို့ အိုင်တီတို့ စတဲ့ ညီအကို တွေ…အိမ်သာ ၃ ခန်း ကို လူ ၆၀ လောက် တန်းစီ ကြရတာတွေ ကျွန်မက မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေဖွင့်ရင်း ပိုက်ပြုတ်ပြီး တကိုယ်လုံးရွှဲကုန်တာကို လှမ်းရယ်နေတဲ့ ကိုတယောာက်ပြုတ်နေတဲ့ ရေပိုက် ကို ဆက်လိုက် ၊ နောက်တနေရာက ထပ်ပြုတ်လိုက် ၊ ထပ်ဆက်လိုက် ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေ…ဖုန်းတွေရဲ့ နှိုးစက်ကြောင့် … Read more
ကျ-ည်ဆံထိတာ အသဲကွဲသလောက်မနာကျင်ရလို့ ဘယ်သူ့အတွက်မှspeak outလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲလင်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲလင်းကတော့ ပြည်သူပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ဆန္ဒအနဲငယ်ကွဲလွဲခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်မှုအချို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့သလို ဘယ်ဖက်ကမှလဲ့ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး အခုချိန်မှာတော့ သူဟာဝတ္တရားအရလောက်ပဲ Pray fir myanmar ဆိုပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာအချစ်ရေးတွေနဲ့အလုပ်များနေခဲ့ပြီး အသဲကွဲလိုက် ဖီလ်းလိုက် ဘီယာသောက်လိုက်နဲ့ပဲသာယာနေခဲ့တာလဲဖစ်ပါတယ် ။ အခုတခါမှာတော့ သူဟာ ဘီယာဘားကအပြန်မှာတင်ခဲ့တဲ့စာတကြောင်းကတော့ အတော်လေးစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျ-ည်-ထိမှန်တာဟာ အသဲကွဲသလောက်မနာကျင်ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့အတွက်မှ speak out လုပ်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပို့ကိုတော့ ၃ နာရီအတွင်းမှာပဲပန်ဖျက်သွားပြီး ဖီးလ်ပို့တခုထပ်တင်ပြီးဖုံးကွယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် credit ဖေ့ဘွတ် unicode ပရိတျသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျအောငျရဲလငျးကတော့ ပွညျသူပရိတျသတျတှနေဲ့ ဆန်ဒအနဲငယျကှဲလှဲခဲ့တာကွောငျ့ ဝဖေနျမှုအခြို့ခံခဲ့ရပါတယျ။ သူဟာတျောလှနျရေးအတှကျဘာမှမလုပျခဲ့သလို ဘယျဖကျကမှလဲ့ဘာမှမပွောခဲ့ပါဘူး အခုခြိနျမှာတော့ သူဟာဝတ်တရားအရလောကျပဲ Pray fir myanmar ဆိုပွီး တငျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာအခဈြရေးတှနေဲ့အလုပျမြားနခေဲ့ပွီး အသဲကှဲလိုကျ … Read more
ခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြမြဇာတ်လမ်းလေးပါ(မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက်)
မြမြ သည် လှ၏ ။ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မြမြဆိုသောကလေးမလေးသည် မြို့ကြီးသူများ နည်းတူ အသားအရေမှာ ဖြူဖွေး နုဖတ်လွန်းလှသည်။ကိုဘမောင် အိမ်သို့ မြမြ စရောက်သည့် နေ့တွင် မြမြသည် တစ်စုံတစ်ခုအား စိုးရွံ့နေသဖွယ်ထင်ရသည်။အိမ်ဖော်မလေး မြမြ ၏ မျက်နှာ အချိုးအစားလေးအား ကိုဘမောင် ဆိုဖာမှ ထိုင်ကာ သေချာအကဲခေတ်နေသည်။မြမြသည် ခေါင်းကိုသာ ငုံ့မြဲတိုင်းငုံ့ထား၏။ “မစော ကလေးမလေး နာမည်က” မစောဆိုသော အိမ်ဖော်ပွဲစားမိန်းမကြီးသည် မြမြ ၏လက်အားစုပ်ကိုင်ကာ ကိုဘမောင်အား သွက်လက်စွာ ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ “မြမြ ပါ ကိုဘမောင် .. ကလေးမလေးကိုတော့ ကျွန်မအာမခံပါတယ်ရှင်” “ဒါတော့ ကျုပ် ခင်များစေတနာ နားလည်ပါတယ် မစောရယ် ပြသနာမှ မဟုတ်တာ” မြမြသည် အဆီဝင်းနေသော … Read more
အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် အကျအဆုံးများစွာဖြင့် ဆုတ်ခွါခဲ့ရတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်(ရုပ်သံ)
မုံးကိုး၊ ဆုတောင်းတောင်ရှိ ကိုးကန့် MNDAA တပ်ဖွဲ့အား စစ်ကောင်စီမှ အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့် အကျအဆုံးများဖြင့် ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရ (ရုပ်/သံ) ကိုးကန့်၊ MNDAA တပ်ဖွဲ့မှ ခြေကုပ်ယူထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မုံကိုးမြို့နယ်၊ ဆုတောင်းတောင်စခန်းအား အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှ လက်နက်ကြီးပစ်ကူများ အပြင်းအထန်ပစ်ခတ်ကာ မြေပြင်မှလည်း တပ်ရင်းများစွာဖြင့် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့် MNDAA မှ ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကိုးကန့်တပ်မှူးတစ်ဦး ထံမှ သိရသည်။ ဆုတောင်းတောင်စခန်းအား ကိုးကန့်ဒေသရှိ စစ်ကောင်စီအခြေစိုက် တပ်စခန်းများမှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နှင့် ၁၈ ရက် မနက်ပိုင်းအထိ အကြိမ်ရေ ၂,၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ တချိန်တည်းအတွင်း စစ်ကောင်စီ တပ်ရင်းများမှ နေ့ဘက်တွင် ၂ ကြိမ်နှင့် ညဖက်တွင် ၃ ကြိမ် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ … Read more
NLDပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆရာ မုံရွာအောင်ရှင် ပြန်လည်လွတ်မြှောက်
NLDပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆရာ မုံရွာအောင်ရှင် ပြန်လည်လွတ်မြှောက် အောက်တိုဘာ ၁၈ယနေ့ နစက ကောင်စီ မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသူအနက် NLD ပါတီရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဆရာ မုံရွာအောင်ရှင် အပါအဝင် မီဒီယာ သမား အချို့ လည်းပါဝင်လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်. အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှ အကျဉ်းသား/သူများနဲ့ တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူ ၅၀၀၀ကျော်ကို အမှုပိတ်သိမ်းကာ လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြုကြောင်း ယနေ့ အောက်တိုဘာ လ ၁၈ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်. လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်တွင် သတင်းမီဒီယာ အချို့ ပါဝင်ပြီး Kachin Wave မှ ကိုလရော်၊ 74 မီဒီယာ မှ မချမ်းဘူနဲ့ မဆိုင်းနုပန်၊ Mizzima မီဒီယာက ဒေါ်သင်းသင်းအောင်နဲ့ ဦးထုံ(ခေါ်)ဂျိမ်းစ်၊ ခေတ်ပုံရိပ်က ကိုအောင်ခန့်နဲ့ အမိမြေဂျာနယ်က သတင်းထောက် ဦးကျော်မြင့်တို့ … Read more
ယနေ့ညနေတွင် ယောက်ျားတွေထောင်ထားတဲ့မိုင်း နင်းမိပြီး ဇနီးရဲမေများသေဆုံးခဲ့သည့် ခလရ(၅၈)တပ်ရင်း
ယနေ့ညနေတွင် ယောက်ျားတွေထောင်ထားတဲ့မိုင်း နင်းမိပြီး ဇနီးရဲမေများသေဆုံးခဲ့သည့် ခလရ(၅၈)တပ်ရင်း ဝိုင်း​မော် ခလရ( ၅၈)ကစစ်​ကောင်စီ စစ်သားများရဲ့ ဇနီးများ ၎င်းတို့အမျိုးသားများ​ထောင်ထား သည့် မိုင်းနင်းမိပြီး ၃ ဦး​သေ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ ဝိုင်း​မော်မြို့ရှိ စစ်​ကောင်စီတပ် ခလရ ၅၈ တပ်ရင်းမှစစ်​ကောင်စီ စစ်သားများ၏ ဇနီးများ ယ​နေ့ည​နေတွင် ၎င်းတို့အမျိုးသားများ ​ထောင်ထားသည့်မိုင်းနင်းမိပြီး ၃ဦး​သေကာ ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိ​ကြောင်း သတင်းရရှိသည်……… တပ်စခန်းအနီးရှိ ၄င်းတို့၏ အမျိုးသားများစိုက်ပျိုးထားသည့် စိုက်ခင်းထဲသွားစဉ် ၄င်းတို့ အမျိုးသားများ​ထောင်ထားသည့် မိုင်းနင်းမိပြီး ​သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ​ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်…… ဒဏ်ရာရသူ နှစ်ဦးအား ​မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်​​ဆေးရုံသို့​ခေါ်သွားပြီဖြစ်​ကြောင်းလည်း ဆိုသည်….. အဆိုပါအိမ်​ထောင်သည် စစ်သည်များကို သြဂုတ်လတုန်းက တိုင်းမှူးနှင့် တပ်ရင်းမှူးတို့မှ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြ​ပါသေးသည်……. ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့ အခြေစိုက် … Read more